Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 37)
I-Sony iphucula ubomi bebhetri kunye nekhamera kwiXperia Z1 kunye neZ Ultra
U-Sony ukhuphe i-firmware entsha ephucula kakhulu ikhamera, ubomi bebhetri kunye nempendulo yokuthinta isikrini se-Xperia Z1 kunye ne-Z Ultra
Iimpawu zeKitKat 4.4 zokukhuphela simahla
Kwimpelaveki, imifanekiso ekucingelwa ukuba ibibhekisele kwi-Android KitKat 4.4 ikhutshiwe, njengale uyibonayo ...
I-Android 4.4 KitKat iya kuba nesicelo esingagqibekanga seSMS
Nge-Android 4.4 KitKat unokukhetha enye yezicelo zeSMS esinazo ngokungagqibekanga ukuthumela kunye nokufumana zonke ezi ntlobo zemiyalezo.
Imvula yokujonga kakubi kwi-Samsung Galaxy Note 3
Ukungoneliseki okukhulu okuvela kubathengi beSamsung malunga nokwaziswa kwayo kwangoku, iSamsung Galaxy Note 3, efumana ishawa yokugxekwa.
I-Samsung Galaxy Note 3, umgangatho wefowuni ohluphekileyo kuhlobo lweSprint
Njengoko kuxeliwe ngamawaka wabasebenzisi be-Sprint, i-Samsung Galaxy Note 3 iya kuthi inike iingxaki ezinkulu ukuya kwinqanaba lokungakwazi ukugcina umnxeba.
I-Fungipedia, usetyenziso lwabathandi be-mycology [UHLAZIYO]
Ngaba ungumthandi wamakhowa kunye namakhowa? Ukuba kunjalo, le app ngokuqinisekileyo iya kuba nomdla kuwe. Ndiyahamba namhlanje…
I-Pinball Rocks ye-Sony iza kwi-Android ngokulungisa ikatala
I-Pinball Rocks HD iza kwi-Android emva kokwenza i-iOS ibonise umdlalo wePinball omnandi ngesandi somculo esigqwesileyo.
Uphengululo lwekhibhodi ye-Samsung Galaxy Tab 2
Ikhibhodi ebalaseleyo yeSelfowuni yeBluetooth, efanelekileyo kwiipilisi ezili-10 intshi, nangona inokusetyenziswa nakwisiphi na isixhobo se-Android, iPC okanye iMac.
Ukuya ku-1998 ngenxa yale qanda lephasika likaGoogle
UGoogle uza kujika (okanye ajike, owona mhla wokuzalwa kwakhe awucacanga kakuhle) iminyaka eli-15 ...
Isilumkiso: Uhlaselo lwe-cyber lufunyenwe kubasebenzisi be-WhatsApp
Ngale njikalanga iindaba ziqhekeze uthotho olutsha lokuhlaselwa kwabasebenzisi be-WhatsApp, abaya kufumana izaziso ezinobungozi nge-imeyile
I-Fifa 14 Ngoku kukhuphelo / uphononongo / uhlalutyo
Namhlanje sikuzisa uphononongo lomdlalo webhola ekhatywayo omkhulu njengeFifa 14
Ngoku ungathatha inxaxheba kwi-Android KitKat yokuphumelela ukuphumelela iipilisi ezili-1000 ze-Nexus 7
Ngomhla uGoogle wabhengeza inguqulelo entsha ye-Android 4.4 KitKat, ikwabonisa ukukhuthaza ukuphumelela i-1000 Nexus 7 ngeebhari zeKitKat.
fonYou: Enye inombolo yakho yefowuni yasimahla
fonUsinika ithuba lokuba nenombolo yesibini yeselfowuni yokufumana nokwenza iifowuni phesheya simahla okanye ngexabiso eliphantsi
INkokeli yeProjekthi yeAOSP ishiya iGoogle kuYahoo!
UJean-Baptiste Queru, intloko yeprojekthi ye-Android AOSP, ushiya uGoogle kwiYahoo emva kweengxaki zokuhambelana komqhubi.
Ukungena kwi-Gmail ngaphandle kwephasiwedi kuya kubakho kunyaka olandelayo ngeYubiKey Neo
UGoogle uceba ukwazisa i-YubiKey kunyaka olandelayo, inkqubo eya kukuvumela ukuba ungene kwi-Gmail ngaphandle kwephasiwedi okanye amaqhosha.
Ifoto esemgangathweni esemgangathweni kwiimeko zokukhanya eziphantsi ezivela kwi-Sony Xperia Z1
I-Xperia Z1 yeyona flegi intsha yenkampani esekwe eJapan kwaye iifoto ezithathwe kwiimeko zokukhanya eziphantsi zikumgangatho obalaseleyo.
Ulwalamano lwentando ka-Twitter kunye nabaphuhlisi beenkqubo zomntu wesithathu
Ubudlelwane obungaqhelekanga oboniswa yi-Twitter kunye nabaphuhlisi babathengi be-Twitter bukhetheke ngokukodwa njengoko kunjalo ngeFalcon Pro kunye neeNdlela zeTwitter.
I-Android 4.4 Kit Kat inezinto ezithile kunye nomhla wokukhutshwa
Umhla wokukhutshwa onokubakho wenguqulo entsha ye-Android 4.4 Kit Kat kunye nokuvuza kwezinye zeempawu zayo ezintsha.
Ezona zicelo zintle zokufumana umsebenzi
Sikhethe ezona zona zicelo zintle zintandathu zokuba ufumane umsebenzi eSpain. Ngokucofa nje ngokulula siya kuthumela ikharityhulamu yethu kuye nakubani na esimfunayo.
Amaqhinga e-Android (V): Iifomfayile zeetheminali ze-Android
Iindlela ezimfutshane zezixhobo ze-Android zisebenza kakuhle kuba zisinika ukusebenza ngokukuko okuphezulu ngokucofa nje kube kanye
Isamsung yenza kube nzima ukubuyela kuhlobo lwangaphambili kunye neefowuni ezintsha zeGPS S4
Kwiifemu ezintsha ze-S4, i-Samsung yenza ukuba kungabikho ukubuyela kuhlobo lwangaphambili ukuze ube ne-bootloader ekuvumela ukuba ube lula kwi-ROOT
Ukucaciswa kobuchwephesha kunye nemifanekiso ye-Samsung Galaxy Gear
IGlobal Gear eyothusayo yenze ukubonakala kwayo ukuzibonakalisa njengesiqabane esifanelekileyo sokuhamba nayo nayiphi na iSamsan Companion.
Ukuhanjiswa kweenguqulelo ze-Android zikaSeptemba: I-Jelly Bean iyakhula
Idatha yokuhanjiswa kweenguqu ezahlukeneyo ze-Android iye yavela izolo, kwaye yazisa iJelly Bean njengenguqulo ekhulile.
I-AntTek, ingcambu yefayile yengcambu yokuhlola enomsebenzi omninzi
I-AntTek ngumhloli wefayile omkhulu okhululekileyo, ofumaneka ngokukhuphela ngokuthe ngqo apha okanye kwi-XDA Developers.
Iimifanekiso zeenguqulelo ze-Android
UGoogle kunye nabasebenzisi abaliqela bebephethe ukwenza zonke iimifanekiso zamaphephadonga zeenguqulelo ze-Android zifumaneke kuluntu lwe-Android.
Isamsung yazisa isivumelwano noLindelo ukudibanisa iantivirus kwiziphelo zayo
Isamsung kunye neLookout zifikelele kwisivumelwano sokuphumeza i-antivirus yabo kwiitheminali zenkampani yaseKorea kwaye ke zibakhusela nangakumbi.
Imifanekiso esemthethweni enikezelweyo kwi-Sony Xperia Z1
I-Xperia Z1 iya kubonakala ngomso e-IFA, umboniso wonyaka owenzeka eBerlin kwaye oya kuthi unike umpu kwiziphelo ezininzi.
UGoogle uvale ucango lokudlala umxholo wasekhaya kwiChannelCast
UGoogle akafuni ukuba imveliso yakhe entsha yeChromecast idlale umxholo wayo wasekhaya kwiiapps ezinje ngeAircast. Ukuhlaziya kulivalile inyathelo.
I «Robo Taxi» yiprojekthi entsha kaGoogle
Iya kuba yinto enzima ukuyenza, kodwa uGoogle sele enxibelelana nomvelisi omkhulu weemoto ukwenza i "Robo Taxi"
Imbali ye-Android: Amaxesha aphambili aphambili
Ukusukela ekudalweni kwenkampani nganye ye-Android ukwaziswa kwe-4.3, zininzi izinto ezenzekileyo esizibalisayo kwimbali ye-Android.
Ukucaciswa kweMHL 3.0 kukhutshwa ukuxhasa iVidiyo ye4K
Imigangatho ye-MHL ibandakanya ingxelo entsha, i-3.0 enokudlala iividiyo ezingama-4K (i-Ultra HD) kunye nokusebenzisa iipheripherali ezinje ngeekhibhodi okanye iimpuku.
I-Samsung Galaxy 2 TV, i-smartphone ene-eriyali yokubukela umabonwakude
Isamsung isandula ukwazisa i-Samsung Galaxy 2 TV, i-smartphone ye-Android ene-eriyali eyakhelweyo ekuvumela ukuba ubukele umabonwakude. Iya kukhutshwa kuphela eBrazil.
I-Android yeeDummies: ukuqala kwe-Android
Kule nqaku sichaza indlela i-Android eqale ngayo, eyona nkqubo isetyenziswayo kwihlabathi
Amalungelo awodwa omenzi kaGoogle okwahluka kwenkqubo yokhuseleko ye-Android: Ipateni
Ipateni yindlela esebenzayo yokhuseleko (yokuphela kwesitshixo). Amalungelo awodwa omenzi kaGoogle okwahluka ngokufikelela ngokukhawuleza kwezicelo.
Ikea isungula ikhathalogu yayo ye-elektroniki ka-2014 inyani engathandabuzekiyo
Inkampani yaseSweden i-Ikea isinika ikhathalogu yayo entsha ye-elektroniki apho ukungqinwa okwenyusiweyo kubandakanyiwe ukujonga amanqaku kwindawo yokugqibela.
Amaqhinga e-Android (II): I-TalkBack
I-TalkBack yinto yokufikeleleka kuye nawuphina umsebenzisi, ikakhulu ezinikele kwabo bangaboni kakuhle.
Injineli kaGoogle icacisa izaziso ezingapheliyo kwi-Android 4.3
Injineli kaGoogle icacisile ukuba kutheni izaziso ezingapheliyo zezicelo ezithile ezihlala ngasemva kwi-Android 4.3
Konke malunga ne-Android 4.3
I-Android 4.3 ekugqibeleni ivele kwaye zonke izixhobo ze-Nexus ziyahlaziywa. Sikuxelela yonke into malunga nohlobo olutsha lwe-Android.
I-Android cheats (I): Ulwazi loMnini
Kweli candelo litsha, i-Android Tricks, sizimisele ukukwazisa malunga neendlela ezifihliweyo ze-Android ezinje ngeNgcaciso yoMnini.
I-Android 4.3 ekugqibeleni ilapha
Kumsitho kaGoogle oveliswe namhlanje, ingxelo entsha ye-Android 4.3 ivele ngenkxaso yabasebenzisi abaninzi ngeeprofayili ezithintelweyo.
Umphathi weNokia uStephen Elop ucacisa ukuba kutheni bekhethe iWindows Phone
Umphathi weNokia uStephen Elop ucacisile ukuba kutheni inkampani yaseFinland ikhethe iWindows Phone ngaphezulu kwe-Android njengenkqubo yokusebenza kweefowuni zayo.
Google Play Web entsha
Iindaba zosuku kunye nokunye okuninzi ngokungathandabuzekiyo kuyilo olupheleleyo lwewebhusayithi yeGoogle Play….
Lonke uhlengahlengiso olwenziwe kuhlobo lweWebhu kuGoogle Play
Uhlaziyo kuhlobo lwewebhu lweGoogle Play, ngobuhle obubonakalayo obubonakalayo kunye nokupheliswa kwemisebenzi ethile ebalulekileyo.
ISanDisk ivula ngokukhawuleza kwe-64GB ye-MicroSDXC khadi
Ikhadi lememori elidumileyo leSanDisk libonisa eyona microSDXC ikhawulezayo kwiplanethi ene-80MB / sec yokufunda kunye ne-50MB / sec yokubhala isantya.
Iingcebiso ze-Android (III): Iindlela zoKhuseleko eziSebenzayo
Ukhuseleko lwe-Android lubalulekile kwaye ke ngoko lunezindlela ezahlukeneyo zokukhusela i-terminal: iPIN, Iphasiwedi, iPatheni kunye nokuVula ubuso
Ukulungiswa kweGalaxy Note 2 ene-288GB yokugcina kunye nebhetri ye-9300mAh
Umsebenzisi uguqule i-Galaxy yakhe 2 ngokongeza i-288GB yokugcina kunye nebhetri ye-9300mAh, ulibale ngokupheleleyo malunga ne-aesthetics ebonakalayo.
«Priyanka» isebenzisa ibug kuWhatsApp ukutshintsha amagama amaqela akho kunye nabantu onxibelelana nabo
U-Priyanka uzakutshintsha igama lawo onke amaqela kunye nabafowunelwa bakho, ukuba uyamongeza kuluhlu lwakho xa evela njengefayile kumyalezo.
Uyilo lweVidiyo, iNqaku elitsha leYouTube kwiVidiyo yakho eNtsha yokuKhuphela iphepha: ubuqhetseba bokuyenza isebenze
«Ukulayisha iividiyo kwiYouTube kuya kuba lula kancinci. Makhe sijonge into entsha. Le ilebheli yeyokuqala ...
Izikrini zeglasi zeGorilla ezilandelayo ziya kuba zi-anti-glare kunye ne-anti-bacteria
Ukuchasana nokubonakalisa kunye ne-anti-parasites kulapho iGorilla Glass ibeke khona ukugxila kwizikrini ezicwangciselwe iminyaka emibini ukusukela ngoku.
ICyanogenmod isebenza nge-TextSecure kwisicelo sokuthumela imiyalezo ebhaliweyo ye-Android kunye ne-iOS
Injongo yeCyanogenMod kunye ne-TextSecure kukudala i-platform yesicelo se-iOS kunye ne-Android ukukhusela ngokupheleleyo ubumfihlo kunye nemiyalezo.
Sebenzisana neeMaphu zikaGoogle ngokuba yiTransker yeTrato elandelayo
I-Street View Trekker kwibhegi yakho, umzila kunye neendawo ezithile zokukhumbula kwaye iifoto ezizenzekelayo ziya kukukhathalela ukubonelela ngemifanekiso kwiiMephu zikaGoogle.
Ingxaki ye-antivirus engekhoyo kwi-Android
Kwivenkile yokudlala kukho uninzi lweenkqubo ezingezizo ze-antivirus ezifaka i-malware kwinkqubo yokusebenza, ethi yona ibangele ukuba inkqubo ilahlekelwe sisimo sayo.
I-Samsung Galaxy Note 8 sisiphelo sendlela esiyi-hybridi (i-smartphone kunye nethebhulethi) enesidima esineempawu ezisembindini.
Ukujonga okumangalisayo ngombono wesitrato esona sakhiwo siphakamileyo kwiplanethi, iBurj Khalifa
UGoogle uveze kwibhlog yakhe iifoto ezintsha zepanoramic ezivela eBurj Khalifa, ezithathiweyo ngesixhobo sayo esitsha seStreet View esifikelela kwiindawo ezingaziwayo.
Ezona zixhobo zi-5 zibalaseleyo zokuya nazo elwandle
Njalo ngehlobo elizayo, sizibuza ukuba sithathe ntoni ukuya elwandle: isambrela, ukhuseleko ...
I-HP Slate 21: i-Android eneTegra 4 kunye nescreen esikhulu se-21.5-intshi
I-HP iyaqhubeka nokuvela ngezixhobo ezitsha kunye nenkqubo yokusebenza ye-Android kunye nokwandisa umgca wezixhobo ezinazo, ngeli xesha kunye ne-HP Slate 21.
44 Google ngoku wallpapers for Android yakho
Umsebenzisi uqokelele amaphephadonga angama-44 kaGoogle ngoku, kwiGoogle + yakhe onokuzikhuphela kwaye unike uchukumiso lukaGoogle ngoku kwi-Android yakho.
Imbali ye-HOLO interface
Kule veki ndibhale inxenye yesiqalo sayo se-Android, ukusuka kumfanekiso wayo ukuya kuguquko lweenguqulelo zayo kunye ...
Imvelaphi kaAndy, irobhothi ye-Android
Sinayo kwifowuni yethu, kwiilogo zeblogi esihlala sifunda kuzo, kwizikhonkwane, oonodoli be-USB, izilwanyana ezifakiweyo, iiposta ...
Iprojekthi yeLoon ijolise ekunikezeleni nge-Intanethi kwiindawo ezikude
ENew Zealand, iprojekthi yeLoon iyavavanywa ukugubungela iindawo ezisemaphandleni okanye iindawo ezingazange zibekho kwi-Intanethi.
Idabi lokwenyani phakathi kweerobhothi zamanqindi enkosi kwiCloudRobot
Iirobhothi zomdlalo wamanqindi kwiCloud Robot zivela kwi-E3, kwindibano ephambili yomdlalo wevidiyo. Umlo phakathi kweerobhothi zokwenene.
I-Samsung Galaxy S4 eneQualcomm Snapdragon 800 efunyenwe kwiwebhusayithi yeebench ze-AnTuTu
Utshintsho olutsha kwi-Galaxy S4 kunye ne-chip eyenza ukuba ibe yenye yezona smartphones zinamandla kwintengiso, kodwa uninzi lusexesheni.
I-Intel iqinisekisa, iprosesa ye-Atom Z2560 ikwi-Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Ngale ntsasa i-Intel iqinisekisile ukuba i-chip yayo ye-Atom Z2560 izakuvela iphunyezwe kwi-Samsung Galaxy Tab 3 10.1, efumaneka kamva kule nyanga.
I-Acer yazisa ngeLiquid S1, i-5.7-intshi ye-middle-range ye-smartphone
Ukuba ufuna ukuba ne-Android eneJelly Bean kunye nescreen esikhulu kakhulu se-5.7-intshi, i-Acer's Liquid S1 inokuba yifowuni yakho elandelayo.
Khubaza ukuskena kwefayile kwiGoogle Chrome
Ngaba uyazi ukuba iGoogle Chrome ihlalutya zonke iifayile esizikhuphelayo ukukhangela ukuba zinazo naziphi na iifayile ezinobungozi? ...
Imithombo iqinisekisa i-Sony Xperia L4 "Togari" phablet nge-6.44 ″ kwesikrini, i-HD epheleleyo kunye nosiba
Amarhe avela kwakhona malunga ne-Phablet entsha ka-Sony, i-Xperia L4 "Togari", inezinto ezithile ezichazayo.
Ibenchmark entsha ye-GT-I9600 ethile, i-Samsung Galaxy S4 plus iyavela?
Ngaba imodeli entsha yesiphelo seSamsung ibonakala ngokungummangaliso kwibhentshi ebhengezwe kwimithombo yeendaba, ikhowudi ye-GT-I9600, enokwenzeka i-Samsung Galaxy S4 Plus?
Ubuqhetseba bokuvula iqhosha 'Ndiza kuba nethamsanqa' kwiYouTube
Njengoko uza kukhumbula izolo, ndikuxelele ukuba iYouTube izama ukufaka iqhosha elidumileyo likaGoogle 'Ndiziva ndinethamsanqa'. Kulungile ke,…
Isamsung yenza ikhowudi yekernel ifumaneke kwiVerizon Galaxy S4, Tab 3 7.0, Mega 5.8 kunye neMega 6.3
Isamsung ikhuphe i-kernel evulekileyo yemithombo eyahlukeneyo yeGPS S4, Tab 3, kunye neMega, ivula ezi zixhobo kuluntu ukuba zenze iiROM zazo.
Ityala leAluminiyam ngekhibhodi yeBluetooth, isixhobo esifanelekileyo seNexus 7
Ukusuka kwi-MobileFun basizisela esi sixhobo sokufezekisa ukugcwalisa i-Nexus 7, ikesi kunye nebhodi yezakhelo yeBluetooth 3.0 enoyilo oluhle lwealuminium
I-Samsung Galaxy Note 10.1
Isamsung ikhuphe i-Samsung Galaxy Qaphela 10.1 ukukhuphisana ne-Apple's iPad. Enkosi ngeempawu zayo kunye neStylus sayo, le thebhulethi iza kunika okuninzi.
Uphengululo oluncinci lwe-Samsung Galaxy S3
Ukujongwa kweVidiyo yemodeli encinci ye-Samsung Galaxy S3 ye-GT-I8190 enkosi kwi-Samsung Spain
Hlaziya imodeli ye-Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Ukuphononongwa kwemodeli ye-Samsung Galaxy S3 ye-GT-I9300 enkosi ngoncedo lwe-Samsung Spain.
UDaniel Hughes, umphandi waseBritane wenza umnxeba wokuqala wevidiyo phezulu kweNtaba i-Everest
UDaniel Hughes wenza umnxeba wokuqala wevidiyo ukusuka encotsheni yeNtaba i-Everest kwinjongo yakhe yokufikelela kwisigidi seepawundi kumbutho woNcedo lweComic
I-Samsung Galaxy S4, i-Samsung ithembisa ukukhulula indawo yokugcina yangaphakathi
Ngamanye amaxesha umanyano lungamandla, kwaye njengakule meko, izikhalazo malunga nokuhlala okugqithileyo kwimemori ye-Samsung Galaxy S4 ifikelele kwi-Samsung.
Iphaneli esecaleni lokuhamba ihamba ngokusesikweni kwizicelo zikaGoogle
Iphaneli entsha yokuhamba ecaleni ebonwa kuGoogle Earth kunye neeNtsuku zeentsuku kwaye ezivela kwi-Androidsis siphawule kuwe, ngoku isemthethweni.
Idatha entsha evela kuTapjoy kwisabelo sentengiso se-Android, i-Samsung ilawula
Idatha entsha evela kuTapjoy ibonisa i-Samsung ilawula intengiso ye-Android, kwaye apho kukho umlo omkhulu phakathi kweLg, iSony kunye neHtc kwindawo yesibini.
Umphathi omtsha we-Android uSundar Photosi utyhila izicwangciso ze-OS eyaziwayo kakhulu kwihlabathi
Umphathi omtsha we-Android uSundar Photosi utyhila izicwangciso ezintsha ze-Android kule minyaka imbalwa izayo kwaye ubhengeza i-I / O 2013 yonjiniyela
I-Samsung SideSync ibonisa amandla ayo apheleleyo kwividiyo
Isamsung ipapashe ividiyo yeSideSync apho siza kubona onke amathuba esoftware entsha yomenzi waseKorea
Uyilo olutsha lwebar esecaleni kuGoogle ngoku lusemgangathweni
UGoogle uyibethelele ngebar entsha yokuhambisa inqanawa efakwe kuhlaziyo loMhlaba lwamva nje, isenza ukuba ibe semgangathweni kusetyenziso lwayo.
I-Android itshabalalisa iApple neMicrosoft kwintengiso yefowuni
Kwikota yokuqala yalo nyaka u-2013, i-Android itshabalalisa izitha zayo, iApple neMicrosoft. ukufumana isabelo sentengiso se-59.5%
I-Samsung Galaxy S4, ezinye iziphene zifunyenwe
Ezinye iingxaki kunye neziphene kwi-Samsung Galaxy S4, ngeli xesha i-trim ejikeleze isikrini se-5
I-Samsung Galaxy Qaphela i-3 ene-3GB ye-RAM?
Amarhe amatsha abonisa ukumiliselwa kwe-Samsung Galaxy Note 3 ene-3 GB ye-RAM.
ZoomBoard, ikhibhodi yezikrini ezincinci
Iqela lophando kwiYunivesithi yaseCarnegie Mellon ePennsylvania lenze ikhibhodi, iZoomBoard, ukuze isetyenziswe kwizikrini ezincinci.
Izithethi eziphathwayo zeIMH79
Sikuzisa ukuhlaziywa kwe-iHM79 izithethi eziphathekayo, ngoncedo lweLeTrendy.
Uyithenga phi i-Samsung Galaxy S4 eSpain
I-Samsung Galaxy S4 ilapha. Ngomso, nge-27 ka-Epreli, ibhena entsha iza kuthengiswa ...
I-Sony ibonisa umsebenzi wayo omtsha, i-Sony Xperia Z. Isixhobo esinomsebenzi omangalisayo kwaye sime ngokuchasana kwamanzi nothuli.
I-Samsung Galaxy Note 2
Isamsung ifuna ukuqhubeka nokulawula intengiso ye-phablet nge-Samsung Galaxy Note 2, isixhobo esineempawu ezintle.
I-Samsung Galaxy S3 Mini
Isamsung inika i-Samsung Galaxy S3 Mini, ubhuti omncinci weS3, uyilo olufanayo kodwa amanqaku asezantsi, njengeprosesa yayo engumbini.
Ikhowudi yemvelaphi yewebhusayithi yeSamsung iqulethe idatha evela kwi-Samsung Galaxy S4 Mini
Ukroba ngekhowudi yemvelaphi yeSamsung, igama le-codename iGT-I9190 lafunyanwa. ngaphezulu kwegama leSamsung ye-Samsung S4 Mini.
Nceda uhlale uzolile, iMMORPG zombie
Nceda uhlale uzolile yiMMORPG evela kwisandla sikaMobage: iZombies kwihlabathi lasemva kokubhujiswa.
I-Apple izakuhlawula i-53 yezigidi zeedola ngokwaphula iwaranti kwiimveliso zayo
U-Apple kuyakufuneka ahlawule i-53 yezigidi kumawaka abasebenzisi abakwenqayo ukulungiswa okungalunganga ngokutyhola izixhobo zabo.
Ukudlala kukaGoogle kuhlaziywa ngonxibelelwano olutsha
UGoogle ukhuphe uhlaziyo lwamva nje kuGoogle Play, oluzakufika kwizixhobo ezine-Android 2.2 okanye ngaphezulu kwiiveki ezizayo.
Ukujonga kwakhona: ii-Urbanears Plattan eziMnyama eziLungisiweyo
Uhlalutyo lweeUrbanears Plattan eziMnyama eziLungisiweyo ezibonelelwa yilerendy.com, iwebhusayithi ebaluleke kakhulu kwizixhobo zefowuni.
Sifuna ababhali be-Androidsis
Sifuna ababhali abatsha ukugqibezela iqela lokuhlela lebhlog. Kangangexesha elithile besishiye iindaba ...
Ikhamera yakwaSony eneenkcukacha ezingcono kuneKhamera yeSamsung
AbakwaSony bangaza kuza nekhamera ye-20 Mpx ekhuphisana neeSamsung zekrisimesi.
I-LG Optimus G iya kuba sisikhundla esitsha sesigebenga saseKorea esizimisele ukulwela intengiso ephezulu kunye nale smartphone ingakholelekiyo.
I-Samsung Galaxy S4 irhoxile kwintengiso ngaphambi kokuthengisa.
Isigqibo esimangalisayo seNkundla ePhakamileyo yase-United States yaseMelika sithintele ukuthengiswa kwe-Samsung Galaxy S4 entsha.
Uluhlu lweGlasi yiroses yegolide ye-Samsung kwimakethi ye-smartphone. Kwaye i-Samsung Galaxy S3 yakho yomsebenzi.
Itshaja yebhetri enobungakanani bekhadi letyala
Itshaja ebangela umdla enoyilo lwekhadi letyala le- $ 25 kutshanje kucetyisiwe kwintengiso.
Ifowuni ephathekayo ivela e-China ibhetri ye-5000 mAh
Iselfowuni yaseTshayina iphakamisa isikrini se-4.5-intshi kunye nebhetri ye-5000 mA, iqinisekisa ukuba iya kuba yincinci njengabanye.
Ukukhuphela ngokukhethekileyo iJelly Bean yeSamsung ye-Samsung S2
Isamsung icebisa ukuphucula i-Samsung Galaxy S2 ngendlela elula kwiJelly Bean usebenzisa ikhompyuter yeWindows 7.
I-Neo N003, iifowuni eziphezulu ezibhengezwe ngo-Epreli
INeo N003 yipablet ephezulu eza kuthi thaca e-China ngo-Epreli.
I-iPad mini nge-Android? enye into elungileyo yokuthenga ivela e-China
I-clone efanelekileyo ye-iPad mini yithebhulethi ye-Android ethengisa e-China ngeedola ezingama-200.
I-Samsung Galaxy S4, kutheni ukhetha phakathi kweemodeli ezininzi kangaka?
I-Samsung Galaxy S4 ibhalwe njengenye yezona zixhobo ezihamba phambili zangoku, kodwa ngaba kunjalo?
I-Samsung Galaxy S4 iya kuba yinkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo
Iifoto zisanda kuhluzwa apho sinokubona ikhava yangemva ye-Samsung Galaxy S4, ukongeza kwisiseko esitsha sokutshaja ngaphandle kwamacingo.
IHuawei inyuka nge-G700 isenokuba kukudibana kwakhona kwemodeli yangaphambili
Ukuphehlelelwa kweHuawei inyuka nge-G700 e-China yeyona nto intsha i-firm, imodeli ekuthiwa iphinda yahlanganiswa ngaphambili.
I-Sony Xperia Z ihlaziywa ukukhusela ukufa ngokukhawuleza
U-Sony ukhuphe uhlaziyo ukunqanda ukusweleka ngesiquphe okwenzeka kwiflegi yayo entsha i-Sony Xperia Z, nantsi unesisombululo
Ukucaciswa kwemini encinci ye-Samsung Galaxy S4 kuvela kumyalezo we-Twitter
I-Samsung Galaxy S4 mini iye yangcatshwa ngomyalezo we-Twitter onemifanekiso edibeneyo.
Ixabiso elisemthethweni leHuawei Ascend Mate 6.1 ekugqibeleni lityhilwe
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwabhengezwa ukuba ixabiso elisemthethweni leHuawei Ascend Mate 6.1 iya kuba yi- $ 430.
I-Nexus 4 okanye i-Samsung Galaxy S4? xa kuziwa ekukhetheni kakuhle
Ukuthelekisa okuncinci okwenziwe phakathi kwe-Samsung Galaxy S4 kunye ne-Nexus 4 kungasinceda ukuba sithathe isigqibo sokuba sithathe esiphi ekhaya.
I-Samsung Galaxy S4 yi-smartphone entsha ye-brand yaseKorea. Isiphelo sendlela esiye saba luhlaziyo olukhulu ngokwesoftware kunye nokusetyenziswa.
Isongo seJawbone ngoku siyahambelana ne-Android
I-jawbone sisacholo esinomdla nesakhono sokulinganisa imisebenzi yethu yemihla ngemihla exhaswa zizixhobo zethu eziphathwayo.
Ukwenza i-Samsung Galaxy S4 inokubiza i- $ 236 inye
Uhlalutyo olupheleleyo luchaza ukwenza i-Samsung Galaxy S4 inokubonisa ixabiso leedola ezingama-236 inye.
I-Samsung Galaxy S3 ithengisa nge-49.99 US. kwiRadio Shack
Phantsi kweemeko ezithile eziphakanyiswe yiRadio Shack, ivenkile inikezela ngokuthengisa i-Samsung Galaxy S3 eluhlaza okwesibhakabhaka nge-49.99 US.
Kuthiwani malunga neenguqulelo ze-Samsung Galaxy S4 ene-SnapDragon 600?
I-United States kunye ne-Canada ziya kuba lelinye lamazwe apho i-Samsung Galaxy S4 kunye neprosesa ye-Snapdragon 600 iya kubakho.
I-Samsung Galaxy S4 ivela kwii-euro ezingama-699
Ngomfanekiso opapashwe yivenkile yaseNtaliyane kuye kwaziwa ukuba i-Samsung Galaxy S4 iyakuthengisa nge-699 euros.
Eyona nto ibalaseleyo kule veki kwi-Androidsis
Ukudityaniswa kwamanqaku aphambili apapashwe kwi-Androidsis njengesishwankathelo ukuze wazi ezona veki zibalaseleyo
I-Apple iPhone 5 enezinto ezine zokuqhushumba
I-Apple iPhone 5 inamahemuhemu okuba yafumana iziqhushumbisi ezine zalandelwa yimililo emva kokuphelisa umnxeba.
Ukusuka kwisandla ukuya embizeni, uvavanyo lonyamezelo lwe-Sony Xperia Z
I-Sony Xperia Z yaziswa ngeyure yokupheka ukubilisa kunye nezithako zayo njengovavanyo lokunyamezela.
Ukuhlaziywa kweJelly Bean kwi-Motorola Electrify 2
I-Motorola Electrify 2 inokuhlaziya kwiJelly Bean Android 4.1 kancinci kancinci.
Ibhetri ye-Samsung Galaxy S4 iya kuba ne-NFC chip
Iqinisekisiwe ukuba i-Samsung Galaxy S4 iza kuba ne-chip ye-NFC. Ukongeza, obu buchwephesha buya kudityaniswa kwibhetri yesixhobo, esiya kuba yi-2600mAh.
Jelly Bean kunye neWindows 8 kwi-Asus Transformer AIO
I-Asus Transformer AIO yikhompyuter ye-All-in-One eboniswe eSpain kwaye eguqula ibe yithebhulethi enkulu ye-Android.
I-Samsung Galaxy S4 inekhamera ye-3D
Kungekudala emva kokuphehlelelwa kwe-Samsung Galaxy S4, ubukho bekhamera patent ye3D yeefowuni eziphathwayo sele ikhankanyiwe.
Umfanekiso omtsha we-Samsung Galaxy S4 kwiiyure ezimbalwa emva kokumiliselwa kwayo
Phambi kokumiselwa ngokusesikweni kwe-Samsung Galaxy S4, kwabonakala umfanekiso otyhafileyo wenkampani leyo.
Izixhobo ze-Samsung Galaxy S3, intaba yemoto
Sikwazile ukuzama enye yezixhobo ze-Samsung Galaxy S3, isibambisi semoto seLetendry ngokugqitywa kunye nokusebenza okuya kusonwabisa.
Isimbo somzimba, sebenzisa i-smartphone okanye ithebhulethi yakho ngaphandle kokuzenzakalisa
Ukuthintela ukonzakala sisebenzisa izixhobo zethu, kuzelwe umqondiso, isihlalo esenzelwe ukusebenzisa i-smartphone okanye ithebhulethi ngaphandle kokukhathazeka ngempilo yethu.
Ngokomthetho kaJanuwari 23 walo nyaka 2013, ukuvula iselfowuni ukuze uyisebenzise nenye inkampani eyahlukileyo kuleya yokuqala iba yinto engekho mthethweni
Iifowuni ze-Android zikhenkceza ukufikelela kwidatha ebhaliweyo
Abaphandi abathathu baseJamani abasuka kwiYunivesithi yaseFriedrich-Alexander (i-FAU) bafumanise ukuba emva kokuvalwa kweefowuni ze-Android unokufikelela ...
Imfihlo kwimakrofoni ye-HTC One xa urekhoda isandi
Ubukho bembumbulu ephindwe kabini imakrofoni ye-HTC One iya kubonelela ngokurekhodwa kwesandi ngokuthembekileyo nakweyiphi na indalo esingqongileyo-
Abafowunelwa, + isicelo sasimahla sokulawula abafowunelwa bakho
Abafowunelwa + sisicelo sasimahla kwaye siyafumaneka ngokusemthethweni kwiVenkile yokuDlala esiza kuthi siphucule ukulawulwa kwabafowunelwa bethu.
Ividiyo ibonisa indlela yokwakha i-HTC One
Ividiyo enomdla ibonisa iinkcukacha kunye nokuzinikezela okunikezelwa kwi-HTC One, into eya kuthatha malunga nemizuzu engama-200 iyonke.
Esona sisombululo sisiso sokugcina i-Samsung Galaxy S3 ekufeni ngequbuliso esoyikekayo
Kubonakala ngathi ingxaki yokusweleka ngequbuliso kwi-Samsung Galaxy S3 ayisombululeki ngokupheleleyo, apha ngezantsi sichaza indlela yokunciphisa iziphumo zayo.
I-Samsung Galaxy S4, ukuKhangelwa kwamehlo ukuJika amaPhepha?
Umsebenzi omtsha we-Samsung Galaxy S4 usandula ukuvuza ngendlela esemthethweni, kwaye nokuba ingamarhe nje, uqala ukufumana amandla.
Umlingo wakhelwe kwikhamera yangaphambili ye-Samsung Galaxy S4
Abantu abaninzi ngumlingo, kodwa ngokwenyani itekhnoloji eyakhelweyo kwi-Samsung Galaxy S4 kunye nokulandela umkhondo kwikhamera yangaphambili.
I-MWC 2013, iimodeli ezintsha zeSamsung kwimarike yaseYurophu
Kwi-MWC 2013 esandula ukugqitywa sinokubona uthotho lweetheminali ze-Samsung zaphakathi kuluhlu oluza kumiliselwa kule nyanga kwintengiso yaseYurophu.
Isiphene esitsha sokhuseleko kwi-Samsung Galaxy ene-Android 4.1.2
Kufunyenwe isiphene esitsha sokhuseleko kwizixhobo ze-Samsung Galaxy ezisebenzisa i-Android 4.1.2. Le bug ivumela ukufikelela kwi desktop ephambili
Ibha yokuhamba ngokungwevu ibuyele kuGoogle, iqhinga lokuyenza
Eminye eyadlulayo ndikubonise uvavanyo lukaGoogle olutshintshe ibar emnyama yokuhamba ukuba ingwevu. Emva kokubonisa indlela ...
Uguquko lwetekhnoloji luya kuyichaphazela njani ii-smartphones zethu?
Uhlaziyo lwetekhnoloji luza kuthatha ii-smartphones zethu ziye kwinqanaba elitsha. Izinto ezintsha ezintandathu eziza kufika kwiminyaka elishumi kwizixhobo zethu esizithandayo.
Umnxeba ophathwayo onomdla we-E-Ink waboniswa kwi-MWC 2013
I-E-Ink yifowuni ephathekayo enezoqoqosho ethe yanikezelwa kumboniso we-MWC 2013 ngexabiso leedola ezingama-50 kuphela, ibe yeyona inexabiso eliphantsi kwintengiso.
Ividiyo ye-Samsung Multitasking iboniswa kwi-MWC 2013
Sebenzisa iSamsung Grand kwi-MWC 2013 enobulungisa, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenziseka kokukwazi ukwenza umsebenzi we-multitasking kwii-mobiles zabo kubonisiwe.
I-MWC 2013, iHuawei inyuka nge-G350, i-smartphone engekho sendleleni
IHuawei inike inqaku eMWC 2013 ngeHuawei inyusa iG350, iselfowuni engenamanzi evumela ukuba iifoto kunye neevidiyo zithathwe phantsi kwamanzi.
I-MWC 2013, kuvavanywa iHuawei inyuka ngeP2
Ukusuka kwi-Androidsis sivavanye iHuawei inyuka nge-P2 kwaye, nangona sidanisiwe kukugqitywa kwayo kweplastikhi, ngaphakathi kukho irhamncwa ekunzima ukulenza.
I-MWC 2013, ividiyo ye-HTC enye
Ukusukela nge-MWC 2013 kwi-HTC satand siye sakwazi ukuvavanya isiphelo sendlu esivela kwindlu yaseTaiwan, i-HTC enye.
MWC 2013, basibonisa i-LG Optimus Vu 2
Ukusukela i-MWC 2013 ibibanjelwe e-Barcelona sinokuvavanya i-LG Optimus Vu 2 kunye nesicelo semveli se-LG Vu Talk.
I-MWC 2013, i-LG Optimus G, irhamncwa le-LG
I-LG iphosa indlu ngefestile. Isigebenga saseKorea sibonise i-LG Optimus G, iflegi entsha yenkampani eza kuthi ifike eSpain kungekudala
I-MWC 2013, uSony ulungiselela usetyenziso lweSitishi se-4 se-Android kunye ne-iOS
USony ulungiselela usetyenziso lwe-Android kunye ne-iOS apho sinokudlala khona imidlalo ngqo kwi-smartphone okanye kwi-tablet yethu.
I-MWC 2013, iGeeksphone iveza ii-smartphones ezimbini ezine-firefox OS
IGeeksphone izinikele ngamandla kwinkqubo entsha yokusebenza yeMozilla, iFirefox OS kwaye kwiMWC 2013 iya kuzisa ii-smartphones ezimbini ezintsha.
Iselfowuni inika iifowuni ezimbini ezitsha kwi-MWC 2013
I-Alcatel ikhona kumdlalo weBarcelona kunye neemodeli ezimbini zeefowuni eziphathwayo, enye ephezulu kunye nesiphelo esisezantsi.
Umfanekiso ovuzayo weHTC M7 ubonakala umnyama
Kwimifanekiso ye-HTC M7 emnyama nomhlophe, iphakamisa ukwaziswa kwayo ngokusesikweni kulo ngoFebruwari 19 eLondon naseNew York.
Imidlalo yokudlala-ikhonsoli entsha yomdlalo wevidiyo we-Android
IGamestick isilawuli kunye nekhonsoli yomdlalo wevidiyo ngaxeshanye, enikezelwe ngokukodwa kwi-Android.
I-Sony Xperia ZL iya kuthengiswa ngo-Epreli eCanada
Ukucaciswa okunomdla, i-Sony Xperia ZL iya kuboniswa eCanada ngenyanga ka-Epreli.
IVertu Ti -iselfowuni eyi-7900 kwimarike
Oku kugwetyelwe ngokugqibeleleyo kwii-euro ezingama-7900 zokuhlawulela le Vertu Ti, enento eyenza ukuba ibe yeyona ibiza kakhulu kwihlabathi.
LG kunye nemimangaliso ye-MWC 2013
Inkampani ye-LG iyothusa ngezibhengezo kunye nezixhobo eziza kuthi zikho e-Barcelona ngexesha le-MWC 2013
I-Android 4.2.2 iqala ukufika nge-OTA kwi-Nexus
Sele sinayo le nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza kaGoogle, i-Android 4.2.2, ethi izise izilungiso kwiibugs ezahlukeneyo kwi-50 Mb nje.
I-Bq Aquaris, isiseko esiphambili sokwenza iSpanish
I-Bq, inkampani ekhethekileyo kwiipilisi kunye ne-e-ncwadi, ifuna ukwenza i-leap enkulu kwimarike ye-smartphone kunye ne-Bq Aquaris, ene-processor-core processor.
IWindowsAndroid: Eyona ndlela yokusebenzisa i-Android kwiPC yakho
Zininzi iindlela zokusebenzisa iWindows kwiWindows. Sinokuthiya i-BlueStacks, i-Android x86, i-SDK yesiphelo kunye nezinye ezininzi, ...
Uhlaziyo olutsha lwe-Android 4.2.2 luyeza
Kukholelwa ukuba kwiiveki ezizayo uGoogle angaqhubeka nokuhlaziya nge-OTA ukuya kuhlobo lwe-Android 4.2.2
Ifowuni entsha ye-Samsung Galaxy S4 iya kuqala itekhnoloji entsha ye-audiovisual
I-LifeKraze, inethiwekhi yentlalo esekwe kwiinjongo zakho kunye neenjongo zakho
Isandula ukufika kwiVenkile kaGoogle yokudlala, i-LifeKraze yenethiwekhi yoluntu isekela impumelelo yayo ekwabelaneni ngeenjongo ezahlukeneyo kunye neenjongo ezibekwe nabanye abasebenzisi
I-Sony Xperia Togari, ene-6.44-intshi ye-FullHD yesikrini
Ifoto evuzayo kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo inokuba yeyesony Xperia Togari, irhamncwa elitsha likaSony apho inkampani yaseJapan ijonge ukulawula intengiso
Uyakhumbula ukuba yayinjani ifowuni yokuqala yakwa-Motorola?
UMartin Cooper ngewayenze umnxeba wokuqala nge-Motorola DynaTAC (ifowuni yokuqala) kukhuphiswano lwayo ngqo, uJoel Engel.
IMotorola DROID RAZR M ilindele usuku lweValentine
Umqhubi weVerizon uza kupapasha uhlelo olupinki lweMotorola DROID RAZR M ngoJanuwari 24 njengomboniso weSuku lweValentine.
Unemizuzu emi-5 yokuhlanganisa i-Sony Xperia Z
Ividiyo enomdla kwi-YouTube isibonisa indlela yokuhlanganisa i-Sony Xperia Z kwimizuzu nje emi-5.
UGoogle uqinisekisa isisombululo sokudlala kwakhona ngeBluetooth A2DP yenguqulo elandelayo ye-Android 4.2
Ngelixa i-Android 4.2 izise inani elikhulu lokuphuculwa, ikwazisile nesabelo sayo seengxaki eqongeni. Phakathi kwabo, ...
Ukuhlaziywa kweJelly Bean kubhengezwe nge-Samsung Galaxy S2 kwenye inyanga
I-Samsung Galaxy S2 inokuhlaziya kwi-Android 4.1.2 ngokusebenzisa inkqubo ye-Samsung Kies ekuqaleni kukaFebruwari.
Inkampani yaseTshayina iveza umfanekiso ogqibeleleyo we-iPhone5
Umvelisi waseTshayina ucebise ngentsimbi ye-iPhone5 kwintengiso, eya kuthi isebenze njengenkqubo yokusebenza ye-Android kunye nonxibelelwano lwe-iOS.
Uthotho lweSamsung S S lungaphezulu kweeyunithi ezili-100 zezigidi ezithengisiweyo
Umgca we-Samsung Galaxy S ufikelele kwinani le-100 yezigidi zeeyunithi ezithengisiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
IMoga Pro-Umlawuli omtsha woMdlalo we-Android
Nge-Moga Pro kunikezelwa ukuba ukwazi ukusebenzisana ngokukuko kunye nemidlalo yevidiyo ye-Android nangonxibelelwano lweBluetooth.
Itactus inezinto ezimangalisayo zokuchukumisa ikhibhodi
Inkampani yeTactus yazisa ngetekhnoloji entsha yezikrini zokuchukumisa ezifuna ukulingisa imvakalelo yokuchwetheza kwikhibhodi yesiko
I-Android: Uphengululo luka-2012 kunye nezinto ezininzi ezintsha zango-2013
Ingaphezulwana nje kwesithathu kuJanuwari 2013 sele idlulile, kuGooglelizados kubonakala ngathi lithuba elihle ...
I-Qualcomm iveza iprosesa yayo entsha ye-Snapdragon 800 kunye ne-600
I-Qualcomm isandula ukuhambisa iprosesa yayo entsha ye-Snapdragon 800 kunye ne-Snapdragon 600, ngokusebenza kunye namandla angazange abonwe ngaphambili.
Imfazwe ye-ecosystem war: ebomvu eshushu
Kumashumi eminyaka, iinkampani zetekhnoloji eyahlukeneyo ziye zangqubana, kwaye inye kuphela eye yaphuma inentloko ebambe phezulu….
I-Samsung Galaxy S3 mini iyathengiswa nge-Android 4.1.2
Iindaba zamva nje zikhankanya ukuba i-Samsung Galaxy S3 mini isemarikeni kwakhona kodwa nge-Android 4.1.2 ngexabiso lama-euro angama-400.
I-Galaxy S4 - Itekhnoloji yokusika ye-2013 kwividiyo
Ividiyo ye-Samsung Galaxy S4 ibonakala ikhankanya ii-specs ezinkulu ngeyona teknoloji ilungileyo ka-2013.
Ungayithanda i-Samsung Galaxy Note 2 emnyama? Kuyabonakala ukuba oko ngekhe kuphinde kwenzeke
I-rumor ekhankanye i-Galaxy Note 2 emnyama ayiyonyani, kuba umfanekiso wayo yayiyimodeli elula eyenziwe ngumsebenzisi ongaziwayo.
Amanyathelo obuchwephesha ali-10 obuchwephesha bonyaka ka-2012 kwindalo iphela ye-Android
I-Android isishiyele izimanga ezininzi kulo nyaka ka-2012. Ukusuka kwi-Androidsis sithathe isigqibo sokujonga ezona ndawo ziphambili ekukhuleni rhoqo.
Ukusebenza kwetekhnoloji yeselfowuni ukuqala imoto
IHyundai izakube ibonisa imoto ngo-2015 enokuthi iqalwe (okanye itshixelwe xa kubiwe) kusetyenziswa itekhnoloji ye-NFC.
ISouth Korea iya kufuna ukudibanisa izicelo zokhuseleko kwii-mobiles
Ngokudibanisa isoftware ekhethekileyo, uMzantsi Korea ucebisa ukuba abavelisi abahambahambayo banqande ukuxhatshazwa kwi-cyber.
I-Samsung Galaxy S4 inokubakho ngo-Epreli nge-S-Pen
Kutshanje kuye kwaveliswa amarhe, apho kuthiwa i-Samsung Galaxy S4 iza kuhamba ne-S-Pen kwinyanga ka-Epreli.
Ividiyo ibonakala ngeSony Xperia TL ehlaziyiweyo kwi-Android 4.1.2
Ividiyo enomdla ibonisa ukusebenza kwe-Sony Xperia TL esebenza ne-Android 4.1.2 ngaphambi kokuhlaziywa kwayo ngokusemthethweni.
I-GT-i9500 inokuba ligama lesiqhelo kwi-Samsung Galaxy S4
Uthotho lwamarhe malunga ne-Samsung Galaxy S4 igqibe kwelokuba inombolo "4" ayinathamsanqa kwinkampani.
Eyona midlalo ilungileyo kunye neeapps zonyaka
Nangona ayilo luhlu olusemthethweni njengoko sinokulufumana kwiVenkile yeApple ngezona zicelo zibalaseleyo kwaye ...
Abavelisi baphuhlisa izixhobo ezintsha zekhamera ye-HD
U-Aptina ngomnye wabavelisi benzi boluvo lwekhamera, abanikezela ukurekhoda ividiyo kwi-1080p kwi-60 fps ngelixa uthatha iifoto kwangoko.
Umfanekiso wetshaja yeNexus 10 ebizwa ngokuba yiPogo uyavela
Amarhe akutshanje akhankanya itshaja yamagnetic egama lingu-pogo eya kuphuhliswa yi-Samsung yeNexus 10.
Iimephu zikaGoogle zibonisa iplanethi ebusuku
Ukuba ukhe wacinga ukuba isixeko sakho sibukeka kanjani ebusuku esithubeni, uGoogle neNASA benze ...
Isamsung inakho ukubonisa i-smartphone ngesikrini esiguquguqukayo se-AMOLED
Isamsung inokuba ilungiselela into enamafutha kakhulu kwi-CES elandelayo ye-2013.Ingxilimbela yaseKorea inakho ukubonisa isixhobo ngescreen se-AMOLED.
Iiseti zezipho (VI): «Imfuno yeSantya: Eyona ifunwayo»
Isixa sethu sesixhenxe seMidlalo yeZipho sijolise kwakhona ekuqhubeni, sijonga isidingo seSantya: Eyona ifunwayo.
Awuyi kukwazi ukudibanisa izixhobo kwi-USB port yeGoogle Nexus 4
Iindaba zangoku zikhankanya ukungangqinelani phakathi kwezibuko le-USB leGoogle Nexus 4 kunye nezinto ezahlukeneyo zentengiso.
Isixhobo esinomdla sibonakala ngathi sidanyaza ii-mobiles ze-Sony Xperia
I-Sony Xperia Arc, i-Xperia S kunye ne-Xperia Arc S ngoku inokukhanyiswa ngokulula ngesicelo esibonelelwa yinkampani.
Naliphi na iGlove yenza kube lula ukusebenzisa iiglavu kwizikrini zokuchukumisa
Naliphi na iGlove lulwelo olunokuthi lubekwe kwincum yomnwe weiglavu ukuze usebenzise ngokulula izikrini zokuchukumisa eziphathwayo.
U-Sony ubeka i-Xperia E njengesixhobo esisezantsi esisefowuni kwintengiso
U-Sony uthathe isigqibo sokungena kwintengiso nge-Xperia E njengommeli ofanelekileyo wetekhnoloji esezantsi enikezelwe kuhlahlo-lwabiwo mali olusezantsi.
Ukuhlaziywa okuphakathi kunye nexesha elide kucwangciselwe iifowuni ze-Sony Xperia
Iimodeli ezahlukeneyo zeefowuni zeSony Xperia ziya kuhlaziywa kunye ne-ICS kude kube sekupheleni kuka-2013 kunye noJelly Bean kwi-Q3 2013.
Isamsung i-GT-I9525 inokuba ngumnwe wokuqala we-Android 5.0 oza kuziswa kungekudala
Amarhe akutshanje akhankanya ubukho be-Samsung GT-I9525, iselfowuni enokuba ne-Android 5.0 kwindawo yayo.
Ibhetri entsha enawokuphinda kabini amandla e-Samsung Galaxy Note 2
Ibhetri entsha enegunya elandiswe kabini umthamo we-Samsung Galaxy Note 2 ithengisiwe ukusukela nge-21 kaDisemba ngo-2012.
Iimodeli ezisetyenzisiweyo ze-Samsung Galaxy S3 ziqala ukuthengiswa ngexabiso eliphantsi kakhulu
I-Samsung Galaxy S3 esetyenzisiweyo ifundelwe ukuthengisa, kwaye kuyabonakala ukuba emhlophe yenye yezona zibiza kakhulu kunokubakho.
Isikrini esigcweleyo esine-intshi ezintlanu kwi-LG Optimus G5 entsha ngoMeyi 2
I-LG Optimus G2 iya kuqala ngoMeyi 2013 iprosesa ye-quad-core ngesantya esiphezulu, inkqubo entsha yokusebenza kunye nesikrini esigcweleyo seHD.
Isamsung ayisayi kubonelela ngeebhetri zeApple
Intsebenziswano yakwaSamsung iphela ngokupheliswa kwesivumelwano esasivumela ukuba senze iibhetri zamacwecwe kunye nezinye izixhobo zeApple.
IndawoRaider, i-malware eyilwe yiPentagon
IndawoRaider sisicelo esenziwe yiPentagon ethatha imifanekiso kunye nekhamera yakho yokubuyisela imeko-bume kwindawo ezintathu.
Ukuhanjiswa okuthe kratya kwe-ultra-thin mobile kungaboniswa kwimarike
Iifowuni ezihamba nge-Ultra ezinqabileyo zinokufikelela kwizandla zethu ngexeshana elifutshane, eligcina ubungqingqwa be-1 mm ubukhulu.
Ukuphononongwa kweentaka ezinomsindo weeNkanyezi
Sikuzisa uhlalutyo lwethu lweeMfazwe zeNyoni eziNomsindo.
IiFlexible smartphones, isayensi okanye inyani?
IPhepha lefowuni kunye ne-Snaplet ezimbini eziguqukayo ze-smartphone
I-Samsung Galaxy S4 rumours iqala
Iimpawu ezinokubakho zeSamsung Samsung S4 kunye nomhla wokuqaliswa kwayo inokubuyela kwisiqingatha sokuqala sika-2013.
Isithuba esingcwele, indawo yesimulator kwikickstarter
Ngaba uyakuthanda iinqanawa ezikhethekileyo? Inzululwazi ye-RPGs? Jonga indawo kaThixo
Isiqalisi seClaystone, isiqalisi esimangalisayo se3D
Isiqalisi seClaystone sisiqalisi se3D esifumaneka simahla kwi-Android kwiVenkile yokuDlala.
Ilifu leVodafone, ukhuseleko kunye nokugcinwa kwelifu
IVodafone ijoyina utshintsho kwimigaqo-nkqubo kunye nokunikezelwa, njengeMovistar kunye neYoigo, kwaye inikezela ngenkonzo yokugcina ebizwa ngokuba yiVodafone Cloud
I-Samsung Galaxy S3 Mini iboniswe ngokusemthethweni
Isamsung yazise ngeSamsung ye-Samsung S3 Mini, i-smartphone ene-processor-core kunye nescreen se-Super AMOLED yesine.
Uluhlu lwee-APN eziphambili zaseSpain
Indlela yokumisela i-APN entsha kunxibelelwano lwedatha yesixhobo sakho esiphathwayo
I-ZTE ivele nje kwi-IFA eBerlin i-ZTE Grand X IN, i-smartphone ebonakala ngokubetha iprosesa ye-Intel
Isifundo esilula sokwenza ingcambu kunye nokubuyiselwa kwe-Samsung Galaxy SIII kwinyathelo elinye
Sijonga izinto zakutshanje ezivela kwiMadfinger Games. Trigger efileyo ngumdlalo othe tye kwaye onwabisayo, ongathobekiyo.
Sichaza ezona zinto zintsha ziphambili ezibandakanya i-Android 4.1 Jelly Bean, ethiwe thaca kwinkomfa ye-I / O kaGoogle
I-Intel ikholelwa ukuba iiprosesa ezininzi ezisisiseko ezakhelwe kwii-smartphones ze-Android azilungiswanga kakuhle.
Umfanekiso ovuzayo usibonisa i-ZTE Athena, i-smartphone entsha evela kwinkampani yaseTshayina ebonakala kuyilo lwayo oluncinci.
Kwiiveki ezi-2 ngaphambi kokumiliselwa kwe-Samsung Galaxy S3, sele ikwazile ukufumana abasebenzisi abazizigidi ezilithoba ukugcina ifowuni yayo.
Ingqalutye iwotshi enobuqili onokuthi uqhagamshele kwi-Smartphone yakho, nokuba yi-Android okanye i-iOS, ikwanakho nokwamkela isaziso.
I-Alarm yemvula (iAlarm yemvula) ikwazisa nge-Android yakho ngemvula esondela kuwe ngexesha lokwenyani
I-Android yenza umbulelo wekofu kwiZipwhip, eyenze umatshini olungiselela ikofu oy-odole ngeSMS
I-LG Cloud ikuthatha ilifu
I-LG Cloud igcina iifayile zakho zemultimedia kwilifu ukuze uzisebenzise kwi-Android yakho, kwi-PC okanye kwi-LG TV ekusasazeni
I-Google Play iya kukuvumela ukuba uhlawule nayiphi na inkonzo ngetyala lenyanga
UGoogle wandise inkonzo kaGoogle Play, ekuvumela ukuba ungene kwinkonzo nge-invoice yomsebenzisi.
I-Samsung Galaxy S3 entsha kunye nothotho lweenkonzo zeteknoloji ezintsha zomsebenzisi zinikezelwe
Namhlanje nge-Intanethi, phantse yonke imiqobo esele ikho isusiwe. Unokunxibelelana, wabelane nantoni na, uthethe, ubukele, njl. kuye nakubani na naphi na ehlabathini. Kungenxa yoko le nto abasebenzisi be-Android bezibuza ukuba kutheni kusekho ibhloko yommandla kuGoogle Play (kwiNtengiso yakudala). Kulabo abangakhange bayiqonde, kukho izicelo ezithi, kuxhomekeke kweliphi ilizwe onxibelelana nalo, ziyafumaneka okanye azizukukhuphela.
Abanye abasebenzisi baye baqaphela ukuba xa besebenzisa kakhulu ifowuni kwaye iyatshisa, amabala atyheli acaphukisayo avela kwiscreen sesixhobo.
I-LG ifuna ukuhlasela intengiso ye-smartphone ekumgangatho ophakathi, kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunokubonisa i-LG Optimus L3, i-smartphone ekumgangatho ophakathi, ngexabiso elinomtsalane kakhulu eliza kuvuyisa abathandi be-Android.
UAsus uphumelela umlo ngokuchasene noHasbro
UAsus uphumelele ityala likaHasbro lokusebenzisa igama leTransformer Prime kwiitafile zakhe
I-Angry Birds Space ngoku isemthethweni.
Kule nxalenye intsha, eya kuba ngumdlalo omtsha hayi eyokwandiswa, ezi ntaka zinomoya zingena emajukujukwini. Umxholo womdlalo uyafana njengamaxesha onke, uphosa iintaka kwislingling kwaye kufuneka ubethe iihagu ebe amaqanda. Kuphela ku-Angry Birds Space apho siya kuba sendaweni, ke kuyakufuneka sithathele ingqalelo amandla omxhuzulane kunye ne-physics yayo entsha. Amandla omxhuzulane aya kunika umdlalo ophucukileyo. Siza kufumana ii-asteroids kunye neeplanethi ezinomxhuzulane oya kwenza ukuba iintaka zethu ziphambuke kwindlela yazo kunye nokutsala, iintaka, iihagu kunye nazo zonke izinto ezivela kwiscreen.
I-Qualcomm Snapdragon GamePack i-portal entsha yokudlala
I-Qualcomm Snapdragon GamePack i-portal entsha yokudlala eya kuthi iqalise ngemidlalo emine emitsha, uMngeni weTennis weVirtua, uLawulo lwe-amira, iReem, iBhola
KwiMarike sifumana uninzi lwezicelo ezisebenza njengabafundi beencwadi kunye neencwadi, kodwa eyona ilungileyo kwaye igqibelele ngokungathandabuzekiyo: Mantano Reader. IMantano Reader luxwebhu olunamandla kunye nomfundi wencwadi ozisa iindlela ezininzi kunye nezinto eziluncedo: Zoom yonyusa kwaye unciphise uhlengahlengiso oluzenzekelayo kwisicatshulwa. Ikuvumela ukuba ulawule iifayile ngokudibanisa negama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukukhusela iifayile. Isicatshulwa kwintetho, funda kwiphepha elinye ukuya kwifayile iphela. Umbhalo okanye amanqaku emizobo. Ivumela ukubeka izichasiselo, iibhukumaka kunye nokukrwela umbhalo. Ikuvumela ukuba ukhangele ulwazi okanye amagama kwizichazi magama okanye kwiwebhu (Google, Wikipedia, njl. Izichazi magama zinokufumaneka kwi-intanethi okanye zikhutshelwe ukuze zisoloko zifumaneka. Imowudi yobusuku, yokufunda ngcono ekukhanyeni okuphantsi. Uninzi lwezinto onokukhetha kuzo kunye nezinto eziluncedo.
G-Shock i-Casio smartphone yamadoda okwenyani
I-Casio iye yangena kwihlabathi lee-smartphones, kodwa ngomgca ohluke kakhulu, zii-mobiles ezinganyangekiyo.
IHuawei isungula i-smartphone ekumgangatho ophakathi: IHuwei Honor
IHuawei isungule enye i-smartphone kwakhona, ngeli xesha sesona sisungulo sayo, nge-middle-range ye-smartphone engenazinto ezingacacisekiyo
Emva kokuhlalutya isikrini kunye nehardware yesiphelo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, namhlanje siza kuthetha ngesoftware yale ...
Ikrismesi emnandi evela kwi-Androidsis
Ikopi yamagcisa alungileyo, amagcisa amakhulu ayaba.
I-DROID 4, i-Motorola Razr ngekhibhodi yeQWERTY
Okokugqibela, imifanekiso kunye neenkcukacha zesiphelo seMotorola sivelisiwe.
Jorte, umbutho olula we-Android yakho
NgeJorte ungaziququzelela ngendlela elula nesebenzayo ngakumbi ngenxa yeselfowuni yakho ye-Android.
Ii-Chromebook ziyafikeleleka ngakumbi
Isamsung yehlisa ixabiso lee-Chromebook zayo ngaphandle kokuphulukana nawo onke amandla e-Chrome OS.
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Tab 10.1 (Icandelo lokuqala)
Uphengululo lwethebhulethi ye-Samsung Galaxy Tab 10.1. Icandelo 1 le-3
Uhlalutyo loMdlalo oMkhulu woMlo omncinci, imfazwe epokothweni yakho
Olunye lweyona mifanekiso ilungileyo kunye nesona sicwangciso semidlalo sihlekisayo kwiNtengiso ye-Android,
I-RPG elungileyo ikwi-Android.
I-Android icinga wonke umntu, nkqu nabadala bethu.
I-Android icinga wonke umntu, fumana ukuba kanjani!
Sivavanye iZTE Skate ngescreen se-intshi ye-4,3
Nangona ibisemarikeni kwiinyanga ezimbalwa, iZTE Skate isandula ukudlula ezandleni zethu kunye nemvakalelo ...
I-Adobe iyayeka ukwenza iAdobe Flash
I-Adobe Flash iyayeka ukuphuhla kwezixhobo eziphathwayo
Ukungqubana kwamanxweme, uHlaziyo loMdlalo
Uphengululo lweCaval Clash, ukuntywila kwemikhosi ye-Android
Cloe, uMncedisi welizwi ngeSpanish
Elona lizwi lilincedisayo nangeSpanish
UMBULALI WESIVUMELWANO: IZOMBI, Uhlalutyo lomdlalo
Uphengululo lwam lomdlalo weZombie.
I-Studio ye-FL iza kwiiVidiyo ze-Android
Kwabo bathandi bomculo sineendaba ezimnandi ngakumbi, ukufika kwesicelo seFL Studio se ...
Ukuthatha kukaGoogle, ukugcina ulwazi lwakho
I-Takeout kaGoogle, inkcazo, imisebenzi kunye nezibonelelo
I-LG Optimus 3D: amanqaku ayo
I-LG Optimus 3D: amanqaku ayo.
Uhlaziyo lweSkype lwe-Android ngefowuni yevidiyo
I-Orange Barcelona: I-smartphone ye-Android enesikrini sokuchukumisa kunye nekhibhodi ebonakalayo.
Udliwanondlebe kunye @ignacio_gs
Udliwanondlebe kunye ne-Android devel @ignacio_gs
Dlala imidlalo yeTegra Zone ekhethekileyo kwi-Android yakho
Chainfire 3D ukubaleka Tegra Nvidia Zone imidlalo simahla kwi Android
Isishwankathelo kunye nohlalutyo lokuthengiswa kweefowuni kwikota yokuqala yowama-2011
Isiphelo esitsha seVodafone 858 Smart Terminal, Android “White Label”.
IVodafone yazise ngexabiso eliphantsi, "ilebheli emhlophe" ye-Android.
Ukuvavanya i-HTC Desire S (III)
Uphengululo lweHTC Desire S ngesiSpanish
IViber ilungiselela uhlobo lwe-beta lwe-Android kwezi veki zimbalwa zizayo. Yisicelo esivumela ilizwi ngaphezulu kwe-IP kunye nemiyalezo yasimahla phakathi kweetheminali ezineeapp ezifakiwe.
Thetha ngeVidiyo kunye neAudio ye-Android 2.3 ngeXDA.
Abafana abavela kwi-XDA bakwazile ukufaka inguqulelo ye-Gtalk kunye nevidiyo kunye nevidiyo eza kusetyenziswa kwiitheminali ezine-Android 2.3 (iGingergread)
Wuala kwi-Android. I-Virtual Hard Drive efini.
Uhlelo lokusebenza lweWuala lwe-Android ngoku luyafumaneka. Lawula idatha yakho kwi-intanethi ngale hard drive.
Imakethi ye-Android igqithile kwiVenkile ye App ngenani lezicelo zasimahla.
Udliwanondlebe lwe-Androidsis: @Anderwebs
I-Autodesk ikhupha uguqulelo lweselfowni lwe-Autocad ye-Android ebizwa ngokuba yi-AutoCAD WS
Iinqwelo moya zaseTurkey iEuroleague elilelokhuphiswano olusemthethweni lwaseYurophu. Kwimakethi ye-Android iyafumaneka isicelo esisemthethweni se-Euroleague
I-Runtastic PRO 2.0, umqeqeshi wakho kwi-Android yakho.
Runtastic Pro 2.0 ye-Android. Uqeqesho lomntu ngokubekwa kwe-GPS, irekhodi leeseshoni ngokwahluka kobude, iimephu zendlela, inkqubela phambili
USony ufuna ukuba nemidlalo ekhethekileyo kwiXperia Play yayo
USony wenze esidlangalaleni injongo yakhe yokuba ababhekisi phambili kumdlalo wevidiyo benze imidlalo ekhethekileyo kwi-Xperia yayo yokudlala i-smartphone.
Udliwanondlebe lwe-Androidsis: @RubenGM
Sithethile nomqambi @RubenGM kwaye simbuze imibuzo malunga nehlabathi le-Android kunye neenkqubo ...
Windows Live Messenger ye-Android ngoku ilungile
Isicelo seWindows Live Messenger se-Android saphuhliswa yinkampani iMiyowa kwaye iya kufumaneka simahla kwi-Android Market.
Izikhokelo zokuhamba zeMtrip ngokusebenza ngaphandle kweintanethi.
Izikhokelo zokuhamba zeMtrip zeAnodrid ngokusebenza ngaphandle kweintanethi, awudingi uqhagamshelo lwe-3G ukuzisebenzisa.